Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ayaa ka socda Gobolka Jubbada Dhaxe | Weheliye Online
Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ayaa ka socda Gobolka Jubbada Dhaxe
Dhaqdhaqaaqyada ciidan oo ay dhinacyo iska soo horjeedo ay ku doonayaan iney Al-shabab uga qabsadaan deegaano dhowr ah oo ka taliyaan maamulka Jubaland.
Ciidamada ayaa la soo sheegayaa in ay ku wajahan yihiin degmada Bu,aale iyo kuwa kale oo ka tirsan Gobolka Jubbada Dhaxe ka tirsan.
Gulufkaan ciidaan ayaa imaanaya xili sanadihii dambe dhaliil loo jeedinayay maamulka Jubaland oo la sheegay in uu ka gaabiyay baahinta Maamulka Jubaland iyo la dagaalanka Al-shabab.
Maalmihii lasoo dhaafay waxa la arkayay dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada xooga dalka Soomaaliya (SNA),qeybo ka mid ah Gobolka Gedo kuwasoo qorsheynayaa in ay weraro ku qaadaan magaalad Bu,aale iyo qeybo ka mid ah gobolka Jubada dhaxe.
Waxana ciidamadaan hogaaminayaa taliyaha ciidamada SNA ee Jubaland Janaraal Cali Bagmadow
Hase yeeshee waxa taa badalkeeda magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow ee gobka Jubada hoose ka bilowday dhaq-dhaqaaqyo kuwaas la mid ah oo ay wadaan ciidamad daraawiishta ee maamulka Jubaland kuwaas oo isku diyaarinayaa sidii ay ula wareegi lahaayeen magaalada Bu,aale oo caasimada u ah Maamulka Jubaland.
Dhanka kale waxa is aruursi laga dareemayaa dhanka Al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay Tababaro ciidan usoo gabagabeeyay dagaalayaal ka tirsan Al-shabaab Magaalooyinka Jilib iyo Bu,aale ee gobolka Jubada dhaxe.
Waxa sii kordhayaa dhaliilaha loo jeedinaya maamulka Jubaland oo ku aadan baahinta maamulka oo uu isku koobay Axmed Islaam madoobe.
waxa la filayaa in ay dhacdo doorashada Xildhibaanada jubaland horaanta bisha April ee soo socota,halka la filayo in ay dhacdo doorashada Madaxweynaha 15/8/2019
Previous articleDEG DEG: Gudoomiye waaxeed iyo mid ka mid ah shqaalaha shirkadaha xawaaladaha oo caawa lagu dilay muqdisho.
Next articleMadaxweynaha maamulka KGS oo gaaray Magaalada Hudur